यो कस्तो गीत गाए बद्रीले, जुन गीत सुन्दा आमाहरुको आँशु थामिएन ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»मनोरञ्जन»यो कस्तो गीत गाए बद्रीले, जुन गीत सुन्दा आमाहरुको आँशु थामिएन !
यो कस्तो गीत गाए बद्रीले, जुन गीत सुन्दा आमाहरुको आँशु थामिएन !
By मनिषा थापा on २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०६:४४ मनोरञ्जन
कृषि पर्यटन र उद्योगको व्यापार प्रर्वद्धन गर्न भन्दै गुल्मीमा चलेको तेस्रो गुल्मी महोत्सवमा लोक दोहोरी गायक बद्री पंगेनीले गीत गाउँदा मञ्चमा बसेका नेता स्तब्ध भए भने दर्शकको आशु थामिएन ।
महोत्सवको आइतवार १० औं दिनका मुख्य आकर्षक बनेका गायक पंगेनीले महोत्वको प्रमुख अतिथिमा मञ्चमा बसेका नेपाली कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीलाई देख्न साथ उनले नेता ज्यू खैत हाम्रो गाउँमा आएको जस्ता गीतहरु मार्फत प्रतस्तुत गरेका थिए ।
उनले गीत मार्फत धेरै सन्देश मुलक कुरा थपे तब कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी झनै स्तब्ध भए । गीत गाउँदै गरेका गायक पंगेनीलाई कांग्रेस नेता भण्डारीले आफूले लाएको माला समेत फुकालेर लगाइ दिए ।
गायक पंगेनीले जनताको घ घरमा सबै खाले बिकासका अनुभूतिहरु नपुगेको नेता प्रति दर्शाए । उनले गुल्मी जिल्लामा तिन जना मन्त्री र प्रतिपक्ष दलको नेता पनि प्रभावशाली नेता भएकाले जिल्लाको निम्ती बिकास गर्ने पालो आएको बताए ।
गायक पंगेनीले नेताहरु चिल्ला गाडीहरुमा हिने तर जनताको दुख कष्टलाई बिर्सने गरेकाले त्यसको खबदारी गर्न गीत गाएको बताए ।
गायक पंगेनीले प्रस्तुतिको अर्को गीत स्वरुप आमा बिदा पाउदिन भन्ने गीत गाए । उनले गीत मार्फत बिदेशमा रहेका बिभिन्न कथा वस्तुहरु सुनाए । धेरै दर्शकहरु आमाहरुले आँखाबाट आँसु झारे ।
उनी गीत गाउँदै दर्शकसामु पुगे धेरै आमाहरु उनको मुहार हेर्दै आँसु झारिरहेका थिए । गायक पंगेनीको गीतमा महिलाहरु मात्रै होइन धेरै पुरुषहरुका पनि आँसु थामिएका थिएनन् । गीत गाउँदा पंगेनी आफै भावनामा डुवेर स्तब्ध जस्तै थिए ।
गीतमा उनले बिदेशीएका धेरै नेपालीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्याबस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनले गुल्मी जिल्लाबाट प्रदेशीएका दाजुभाईहरुलाई स्वदेश फर्किएपछि यही ठाउँमा केही गरेर बस्न समेत आग्रह गरे ।